पिच गरेको सडकमा धुलो नलागोस भनेर चप्पल फुकालेर हिडेंपछि..! - Kendrabindu Nepal Online News
पिच गरेको सडकमा धुलो नलागोस भनेर चप्पल फुकालेर हिडेंपछि..!
अन्तराष्ट्रिय, चित्र–बिचित्र, समाचार
संसार हो यो , जहाँ विचित्र विचित्र हेर्नु पर्छ र देख्नु पर्छ । ठाउँ अनुसार , समय अनुसार अनि अवस्था अनुसार ।
संचार र प्रविधिको युग अहिले , त्यस माथि पनि सामाजिक संजालहरु त यति शक्तिशाली भएका छन् कि क्षण क्षणमा यहाँ को के भइरहेको छ पत्तो पनि हुँदैन । केहि नयाँ चिजको तस्विर भयो भने त्यो क्षणभरमै भाइरल नै हुन्छ । यहाँ पनि यस्तै भएको छ ।
यो तस्विरलाई फेसबुक र ट्विटर दुवैमा उत्तिकै शेयर गरिएको छ । तस्विरमा एक सडकको छेउमा चप्पल लस्करै राखिएको छ र सडकमा बच्चाहरु पनि खेलिरहेको देखिन्छ । यो तस्बिरलाई ओडिशाको एक गाउँको भनिएको छ । यसमा दाबी गरिएको छ कि यहाँ ७० बर्षपछि पहिलो पटक सडक बनाएको हो । त्यसैले सर्वसाधारणहरुले सम्मान स्वरुप चप्पल खोलेर सडकमा हिडेका हुन् ।
कतिपयले यो तस्बिरलाई इन्डियाको भन्दै शेयर गरेपनि वास्तवमा यो तस्बिर इन्डोनेशियाको हो । गाउँमा पहिलो पटक पक्कि सडक आएका कारण बच्चाहरु यस्तो खुसि भए की उनीहरुले सडकमा हिलो र धुलो नलागोस भनेर चप्पल पनि खोलेरै हिंडेका हुन् ।